Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser les temps à bon escient. C’est ce qui s’appelle : apprendre la valeur des temps.
Attention, il ne s’agit pas d’un cours de conjugaison, qui fait l’objet d’une formation spécifique. Si vous n’avez pas encore assimilé la conjugaison des verbes, je vous conseille de commencer par la formation “Savoir conjuguer les verbes en français”.
ကောင်းစွာပြင်သစ်ကြိယာကိုအသုံးပြုခြင်း ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် Shopify နှင့်အတူ Drophipping: သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်း!
လွန်ခဲ့သောပြင်သစ်အတွက် conjugation ကြိယာ
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု- ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် Smic အဆင့်တွင် အနိမ့်ဆုံးလစာကို တိုးပေးသည်။
အလုပ်ခွင်ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ခြင်း - သင်လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသလား။
အကွာအဝေးများ၊ မျက်နှာဖုံးများ၊ အစားအသောက်များ၊ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုအသစ်များ
နိုင်ငံတကာတင်းမာမှုများ- ဆိုက်ဘာသတိရှိမှုကို အားကောင်းစေခြင်း။